Echo Smartpen: Tora iyo. Dzokorora. Tumira iyo. | Martech Zone
China, January 17, 2013 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Chinhu chimwe ndechechokwadi mune ino indasitiri… chero musangano pakati pemagadget geeks unoguma mune mamwe magajeti ari kutengwa! Erin Sparks paakandiudza nezveEcho Smartpen yake, ndakabuda. Erin anomhanya Indianapolis SEO firm uye, sesu, inopinda misangano yakati wandei nevatengi. Ini ndiri mumwe wevakomana vekare vasingade kutora zvinyorwa asi vozofanira kukumbira rumwe ruzivo gare gare apo ini ndakakanganwa zvatakataura nezvazvo.
Saka ikozvino ndinotora zvinyorwa. Kubva nhasi, zvakadaro, tichave nehungwaru pamusoro pekuti tinobata sei ruzivo rwemusangano wevatengi vedu. Tine mamwe Livescribe 8 GB Echo Smartpens kutibatsira kunze. Tarisa vhidhiyo pazasi kuti uone zvazvinoreva ... chishandiso chinoshamisa.
Kunyangwe isu tine Echo Smartpens, iro Denga rinotonhorera… kuwiriranisa zvinyorwa zvako uye odhiyo pamusoro peWifi. Tariro yangu ndeyekuti kusanganiswa kwekurekodha uye zvinyorwa zvangu zvinobatsira kushandira vatengi vedu zvirinani nekuona kuti tiri kutora zvese zvese kuti tigone kuita pane ese chikamu chezvavanoda.
Uye kunyangwe shamwari dzangu dzichiziva kuti ndiri shasha yekuenda isina mapepa, ini ndinowanzo kunzwa senge kuburitsa iyo iPad ndeyekunyepedzera uye / kana kunokanganisa hurukuro. Zvakare, pane dzimwe nguva apo doodling nepeni uye bepa zvinouya mune zvakawanda zvinobatsira pane kusvetuka pakati pezvishandiso pane iyo iPad. Ini ndinofungidzira kana iPad iine app iyo yakawiriranisa odhiyo nekutora noti, inogona kukwikwidza chaizvo (pane imwe here uko?). Asi kugona kwekungonongedzera kuchikamu chemavara uyezve kusvetuka wakananga kuchikamu ichocho cheodhiyo kunoshamisa zvinoshamisa.
Zvirongwa zviripo pamwe nekuwedzera mashandisirwo eSmartpen.
Tags: echo smartpenanoraramasaiti marongerokuchenjera
Ndira 17, 2013 na4: 59 PM
Erin anoda wake Livescribe. Iye anovakurudzira zvakanyanya, ivo vanofanirwa kuve vanotsigira pachiratidziro!
Ndira 17, 2013 na5: 27 PM
Ndakaona izvi zvisati zvanyatsonaka.
Ndira 21, 2013 na6: 30 PM
Ini ndaigona chaizvo kushandisa izvi !! Kutenda nekugovana !!!!